प्रदेश नम्बर २: २८ हजार २९८ जनाको उम्मेदवारी दर्ता, विवरण आउने क्रम जारी
२०७४ भदौ २२ बिहिबार, काठमाडौँ। स्थानीय तहको तेस्रो चरणको आगामी असोज २ गते प्रदेश नं २ का आठ जिल्लाका १ सय ३६ स्थानीय तहका विभिन्न पदमा हुने निर्वाचनका लागि हालसम्म २८ हजार २ सय ९८ जनाले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएको विवरण प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । ... बाँकी अंश»
बारा एमालेमा भाँडभैलो, कतै स्वतन्त्र उम्मेदवारी, कतै १८९ जनाको सामुहिक राजीनामा
२०७४ भदौ २२ बिहिबार, निजगढ । टिकट वितरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा नेकपा एमाले बारा निजगढका एक सय ८९ जना नेता–कार्यताले संयुक्त राजीनामा दिएका छन् । बुधबार पार्टीले गरेको निर्णय परिवर्तन गर्दै वडा अध्यक्षको टिकट परिवर्तन गरेपछि असन्तुष्ट निजगढ वडा नं ६ का नेता–कार्यताले संयुक्त रुपमा एमाले परित्यागको घोषणा गरेका हुन् । ... बाँकी अंश»
चौधौं निजामति सेवा दिवस मनाइँदै, निजामती सेवा पुरस्कारको घोषणा, सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नै भएन
२०७४ भदौ २२ बिहिबार, काठमाडौं । चौधौँ निजामती सेवा दिवस कर्मचारीहरुले मनाउँदै छन् । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ट्वीटरमार्फत शुभकामना दिएका छन् । ... बाँकी अंश»
मधेशमा जातिवादीहरुलाई दशा नै छ, काँग्रेस एमालेबीच नै मुख्य प्रतिष्पर्धा हुन्छ : अहिराज
२०७४ भदौ २१ बुधबार, काठमाडौं । दुई नम्बर प्रदेशलाई दलहरुले प्रतिष्ठाको विषय बनाएपनि जानकारहरुले परिणाम के हुन्छ भन्नेबारे आँकलन गर्न नसकिने बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
के भन्छन् वीरगञ्ज महानगरका मेयर उम्मेदवार ?
२०७४ भदौ २१ बुधबार, काठमाडाैं । आसन्न दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी दर्ता भएको छ । ... बाँकी अंश»
कांग्रेस नेता लेखक प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव लड्न इच्छुक, मुख्यमन्त्री नबन्ने
२०७४ भदौ २१ बुधबार, कञ्चनपुर। पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री रमेश लेखक प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर ७ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चा चलिरहेका बेला पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै लेखकले आफू प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न इच्छुक रहेको बताएका हुन्। ... बाँकी अंश»
बिपीको अनुयायी भएर प्रधानमन्त्री हुन पाएकोमा गर्व छः प्रधानमन्त्री देउवा
२०७४ भदौ २१ बुधबार, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको अनुयायी भएर प्रधानमन्त्री हुन पाउँदा आफुलाई गर्व लागेको बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता कार्य उत्साहपूर्ण
२०७४ भदौ २१ बुधबार, काठमाडौ । स्थानीय तहको तेस्रो चरणका असोज २ गते हुने प्रदेश नम्बर २ का आठवटै जिल्लाका १३६ वटै स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्ने कार्य बुधबार उत्साहपूर्णरुपमा भइरहेको छ । ... बाँकी अंश»
प्रदेश नं २ को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुँदै, साँझ ५ बजेसम्म दर्ता गर्न सकिने
२०७४ भदौ २१ बुधबार, काठमाडौं । प्रदेश नं २ को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । ... बाँकी अंश»
सोह्रश्राद्ध सुरु, बुधबार प्रतिपदा तिथिमा श्राद्ध गरिँदै
२०७४ भदौ २१ बुधबार, काठमाडौँ । आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्मका १६ दिनसम्म गरिने सोह्रश्राद्ध बुधबारदेखि सुरु भएको छ । ... बाँकी अंश»
१ सय ३३ तहमा टुंगो लाग्यो काँग्रेसका उम्मेदवार (नामावली सहित)
२०७४ भदौ २० मंगलबार, काठमाडौं । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि २ नं प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसले आफ्ना उम्मेदवारहरुको नाम टुङ्ग्याएको छ । ... बाँकी अंश»
जब उम्मेदवार नै नबनिसकेका काँग्रेस नेतालार्इ स्वागत गर्दै नारा लगार्इयो 'विजयी भवः'
२०७४ भदौ २० मंगलबार, धनुषा । स्थानीय तहको त‍ेस्रो चरणको निर्वाचनकालागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने मिति बुधबारको लागि तोकिएको छ । अहिलेसम्म उम्मेदवारका आकांक्षी मात्रै हुन‍् । मनोज कुमार साह जनकपुर उपमहानगरपालिको प्रस्तावित उम्मेदवार हुन् । ... बाँकी अंश»
दुई वर्षीय बालिकामाथि यस्तो पाप : ठक्कर दिँदा नमरेपछि गाडी हटाएर मारियो
२०७४ भदौ २० मंगलबार, दैलेख । दैलेखबाट सुर्खेत तर्फ गईरहेको ना.६.ख.१९२५ नम्वरको ट्रकले गए राती डुगेश्वर गाउँपालिका वडा नं. २ को मटेलामा दुई वर्षीया बालिका यमुना अर्याललाई कुल्चिएपछि घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको छ । ... बाँकी अंश»
वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा–आराधना गरी इन्द्रजात्रा पर्व मनाइँदै
२०७४ भदौ २० मंगलबार, काठमाडौँ । वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा–आराधना गरी मंगलबार परम्परागत रुपमा इन्द्रजात्रा पर्व मनाइँदैछ । ... बाँकी अंश»
०७० सालको चुनावमा थ्रेसहोल्ड लागेको भए कुन कुन दल हुन्थे पत्तासाफ ? (सूचीसहित)
२०७४ भदौ १९ सोमबार, काठमाडौं । सोमबार व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा थ्रेस होल्डको व्यवस्था गरिएसँगै सो व्यवस्थाको पक्षमा धेरैले प्रशंसा गर्न थालेका छन् । ... बाँकी अंश»
निर्वाचन विधेयक : भ्रष्टाचारको सजाय काट्नलाई छेक्बार, देश टुक्र्याउँछु भन्नेलाई उम्मेदवार बन्न दिने
२०७४ भदौ १९ सोमबार, काठमाडौं । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धि विधेयक सरकारले राखेकै व्यवस्थाहरु राखिएरै पास भएको छ । ... बाँकी अंश»
भ्रष्टाचारीले चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था सहितको विधेयक संसद्को पूर्ण बैठकद्वारा पारित
२०७४ भदौ १९ सोमबार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को सोमबार बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । ... बाँकी अंश»
प्रदेश नं २ मा ११२ जनाको नाम टुङ्ग्यायो काँग्रेसले, २४ जना बाँकी (सूची सहित)
२०७४ भदौ १९ सोमबार, काठमाडौं । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि २ नं प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसले आफ्ना उम्मेदवारहरुको नाम टुङ्ग्याएको छ । कूल ८ जिल्ला भित्रका स्थानीय तह मध्ये काँग्रेसले २४ स्थानीय तहको प्रमुख मात्रै छान्न बाँकी रहेको नेपाली काँग्रेसले जनाएको छ । ... बाँकी अंश»
सर्लाहीमा काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन : २ वटामा कुरा मिलेन २ वटाको लागि ४ बजे बैठक
२०७४ भदौ १९ सोमबार, सर्लाही । सर्लाहीको दुई नगरपालिकामा काँग्रेस र माओवादीको गठबन्धन प्रयास विफल भएको छ । दुबैले आफूले मेयर पाउनुपर्ने अडान नछाडेपछि हरिवन र ईश्वरपुरमा तालमेलको प्रयास विफल भएको हो । ... बाँकी अंश»
टिकट वितरणप्रति रौतहट काँग्रेसभित्र चर्काे असन्तुष्टि, राजपा भित्र पनि उस्तै
२०७४ भदौ १९ सोमबार, रौतहट । टिकट वितरणको विषयलाई लिएर रौतहट काँग्रेसमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । आफ्ना नातेदारलाई र आर्थिक प्रलोभनमा परी पार्टीमा लामो समय क्रियाशील नभएकाहरुलाई टिकट दिएपछि रौटहट काँग्रेसमा असन्तुष्टि चुलिएको हो । ... बाँकी अंश»